Gambella Iyo Xuska 10, aad Ee 29ka Hidhaar - Cakaara News
Gambella Iyo Xuska 10, aad Ee 29ka Hidhaar
Gambella(CN) Arbaco, 9ka December 2015, Waxaa maanta xarunta dawlad deegaanka gambella si wayn looga xusay maalinta qowmiyadaha iyo shucuubaha kaladuwan ee dalkeena itoobiya ee 29ka Hidhaar.
Xuska maalintan oo aysan u kalahadhin mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada federalka ah, mas’uuliyiinta ugu saraysa dawlad deegaanada dalka, kooxaha fanka dhaqanka iyo suugaanta deegaanada, kasoo qaybgalayaasha heerarka kaladuwan, ganacsatada, qurbajoogta, maalgeliyeyaasha waa wayn iyo marti sharaf heer qaran iyo heer caalam isugu jira oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa kadhacay stadiumka cayaaraha kaladuwan ee magaalada gambella.
Munaasabadan ayaa waxaa deegaankeena uga qaybgalay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, afhayeenka golaha xildhibaanada ahna gudoomiyaha XDSHSI mudane Maxamedrashiid Isaaq, afhayeenka kuxigeenka golaha xildhibaanada marwo Fardawsa Maxamed Muxumed, madaxwayne kuxigeenka ahna wasiirka waxbarashada mudane Mowliid Haayir Xasan, kuxigeenka xafiiska hroumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha mudane Axmed Shugri Cabdi ahaana gudoomiyaha gudiga qaban-qaabada DDSI ee xuskan, kooxaha fanka iyo suugaanta, ganacsato iyo xubno kale.
Hadaba, waxaa ugu horayn furitaankii kulankan kahadlay madaxwaynaha dawlada deegaanka gambella mudane Gatluak Hot Khot oo si qotodheer uga warbixiyay xaalada guud ee deegaanka isagoo gaar ahaan tilmaamay in deegaanku gaadhay horumar, nabadgelyo iyo maamul suuban oo taam ah. Waxaa kale oo uu qeexay in colaadihii deegaanku dhamaadeen kadib shacabka, xukuumada dhexe iyo waliba ta deegaanka oo gacmaha is qabsaday una ujeedsaday horumar aan soo noqosho lahayn. Iyo in diyaargarawga balaadhan ee xuska maalintan ay kutimid dadaal, karti iyo halgan ay galeen shacabwaynaha gambella, xukuumada deegaanka iyo ta dhexeba. Hadii aysan xukuumada dhexe garab taagnayna aysan suurta gasheen inaan halkan maanta isugu nimaano.
Kadibna, waxaa madraga lagu soo dhaweeyay afhayeenka golaha federeshinka mudane Ayalew Abate oo kudbad muhiim ah kasoo jeediyay isagoo goobta kusoo dhaweeyay raisal-wasaaraha dalka mudane Hailemariam Desalegn.
Raisal-wasaaraha dalkeena itoobiya mudane Hailemariam Desalegn ayaa khudbad dhaxagalka ah oo meelo badan taabanaysa kasoo jeediyay xuska 10,aad ee maalinta qowmiyadaha iyo shucuubaha dalka. Wuxuuna hoosta kaxariiqay in isbadalka dib u curashada itoobiyada cusub iyo dhismaha nidaamka dimoqraadiyadeed ee dalkeenu ku talaabsaday islamarkaana ku xaqiijiyay isbadal horumarineed oo ku yimid kaqaybgalka iyo kafaaiidaysiga qowmiyadaha iyo quruumaha dalkeena itoobiya uu sal dhig u yahay dastuurka JDFI. Maanta ay tahay maalintii ay shucuubaha iyo qowmiyadaha kaladuwan ee dalku ay dastuurka qalinka kuduugeen. Wuxuuna u hambalyeeyay dhamaan qowmiyadaha iyo shucuubaha dalka meel kasta oo ay caalamka kajoogaan.
Waxaana socod kumaray goobta xuskan dhamaanba kooxaha fanka iyo dhaqanka ee deegaanada dalka iyaga oo muujinaya soona bandhigaya quruxda dhaqamadeena iyo in quruxda kaladuwan kaladuwanaanshaheenu tahay midnimadeena.
Sidoo kale, ayaa waxaa khudbad muhiim ah kasoo jeediyay munaasaban madaxwaynaha dalka Sudan mudane Cumar Xasan Al-bashiir.
Ugudanbayna, madaxwaynaha deegaanka gambella ayaa hadiyado iyo abaalmarino kalduwan gudoonsiiyay xafiiska raisal-wasaaraha, madaxwayneyaasha deegaanada dalka iyo waliba shaqsiyaadkii kaalinta wayn kaqaatay diyaargarawgii munaasabadan. Waxaana lagu soo xidhay heesta calanka qaranka.